एकाङ्की : करार–विवाह - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : कति पटक १२ बज्यो होला जिन्दगीमा?
गजल : थाके जस्तो लाग्यो →
(रङमा टाँगिएको ब्यानरमा ठूलो अक्षरमा ‘करार–विवाह’ लेखिएको छ । त्यहीँ कुर्सीटेबुल राखिएका छन् । त्यहीँ निम्न प्रकृतिका छजना नरनारीहरू बसेका छन् ।)
पुण्य : ३९ बर्से विवाहित युवक (शिक्षित–पठित, लेखन र शिक्षण पेसामा आबद्ध)
सृष्टि : २३ बर्से अविवाहित युवती (शिक्षित–पठित, अविवाहिता, संस्थामा जागिरका लागि विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको खोजीमा भौतारिएकी)
अभित : ३२ बर्से अविवाहित युवक (शिक्षित–पठित, शिक्षण पेसामा आबद्ध)
लक्ष्मी : २७ बर्से विवाहित महिला (शिक्षित–पठित, शिक्षण पेसामा आबद्ध)
लक्ष्मीकान्त : ३५ बर्से अविवाहित युवक (शिक्षित–पठित, वकालत पेसामा आबद्ध)
कर्णकान्त : २५ बर्से अविवाहित युवक (शिक्षित–पठित, बेरोजगार, अर्धपागलजस्तो, बेला न कुबेला बोलिरहने, अर्काका कुरा त्यति ध्यान दिएर नसुन्ने तर आफ्ना कुराचाहिँ अरूले सुनून् भनी चाहने । आफूलाई प्रेम र विवाहसम्बन्धी विभिन्न विद्वान्हरूको दृष्टिकोणको ज्ञाता ठान्ने प्रकृतिको ।)
कर्णकान्त : (चारैतिर हेर्छ) हेर्नुस् दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, मक्ख पनि पर्नुस्, मक्ख पनि नपर्नुस् । (‘करार–विवाह’ लेखिएको तुल हेर्दै) विवाह त्यसमा पनि करार ! आश्चर्यमा पनि अर्को आश्चर्य !! उपयोगी विवाह गर्नुछ भने आफ्नो स्तरमा गर्नुस् ।
अभित : प्रिय चीजलाई प्रेम गरिन्छ । प्रेमलाई स्थायीत्व दिन विवाह अनिवार्य सर्त हैन । दुई मन मिल्यो, प्रेम जन्म्यो र फैलियो । दुई मन फुट्यो, प्रेम टुट्यो र मर्यो । जन्मेपछि कतिबेला मर्ला भन्ने त्रास लिनुपर्ने प्रेम मलाई स्वीकार्य छैन । प्रेमलाई गतिशील पार्न अर्थात् कानूनी मान्यता दिन गरिने विवाह पनि मलाई स्वीकार्य छैन ।
कर्णकान्त : विवाहजस्तो अरू कुनै कुराले पुरुषका सामु थेगिनसक्ने मागहरू तेर्साउँदैन ।
(मनासिब हुँदाहुँदै पनि अन्य पात्रहरू कर्णकान्तका कुरामा उति ध्यान दिँदैनन् । बेला न कुबेला प्रसङ्गविहीन अवस्थामा पनि कर्णकान्त बोलिरहन्छन् ।)
लक्ष्मी : अभित सर ! तपाईं त यो पनि अस्वीकार्य छ, त्यो पनि अस्वीकार्य छ भन्नुहुन्छ । हुँदाहुँदै कतिखेर भन्नुहोला– मलाई यो पृथ्वी पनि अस्वीकार्य छ, यो (सृष्टिलाई औँल्याएर) सृष्टि पनि अस्वीकार्य छ । (हाँसो छाउँछ ।)
कर्णकान्त : हाँसोले नै संसार थेगिने भए मान्छे हाँस्दै जन्मन्थे, हाँस्दै जिउँथे र हाँस्दै मर्थे होला । प्रेमसँग थोरै सम्बन्ध राखेर पाउनु र गुमाउनुको अर्को नाम नै विवाह हो ।
अभित : लक्ष्मी म्याम ! कुरो त्यसो हैन । पृथ्वीलगायत यो पूरै ब्रह्माण्डको सृष्टिलाई चुनौती दिँदै अस्वीकार गर्ने मेरो नीति हैन ।
कर्णकान्त : हामी प्राय:जसो हतारमा विवाह गर्छौं र फुर्सदमा पछुताउँछौँ तसर्थ अभित सर सचेत हुनुहुन्छ, हैन ?
अभित : त्यसो हैन ।
लक्ष्मी : अनि तपाईंसँग कस्तो नीति छ त ?
अभित : म आफूमा मात्रै सीमित हुन चाहन्छु । आफूलाई बाँड्न चाहन्नँ ।
पुण्य : गलत, तपाईं गलत सोचमा डुब्नुभएछ । तपाईं त भमरा फूलको सुगन्ध र रसमा डुबेर आफूलाई भुलाएझैँ पो हुनुभएछ ।
अभित : अब, अरूले गलत भन्दाभन्दै आफूले आफँैलाई ठिक भन्न मिलेन क्यारे ! यो कुरोचाहिँ साँचो हो कि मेरो जीवन तलमाथि भइदियो भने मेरा लागि दुई थोपा आँसु खसालिदिने यो पृथ्वीमा कोही छैन । यसको कारण हो— म सिङ्गो छु, सग्लो छु । म कतै बाँडिएकै छैन । सग्लो हतपत चोइटिँदैन, चोइटिएपछि दुई टुक्रामा मात्र विभक्त नभई अनेकानेक टुक्रामा विभक्त हुन्छ । विभक्त जीवन पनि कहीँ जीवन हो र ?
पुण्य : कुरा गर्यो कुरैको दु:ख भनेजस्तो मात्र हो । के तपाईं यस धर्तीमा आफ से आफ उत्पन्न हुनुभो र ? कि प्रकृतिले पनि स्वत: मान्छे पैदा गर्न थाल्यो हँ !
अभित : मेरो भनाइको अर्थ गलत लागेजस्तो छ । मलाई जन्माउने मेरा मातापिता सारसौँदै हुनुहुन्छ । म अभूतपूर्व मान्छे हैन । जस्तो तपाईं उस्तै म ।
पुण्य : उसो भए कसैको जीवन तलमाथि हुँदा अफसोस गर्ने मान्छे हुँदैनन् त ?
अभित : हुन्छन्, किन नहुनु ! बढेको, पढेको र आफ्नै खुट्टाले धर्ती टेकेको छोरो अकालमै सकियो भन्ने मातापितालाई हुन्छ । एक मनले अङ्श नै थपियो भन्लान् तर अर्को मनले दाजुभाइ पनि सुर्ताउलान् । चेलीहरू पनि माइती घट्यो भनी खिन्न होलान् । यी त स्वाभाविक कुरा हुन् तर मेरो भनाइ अर्कैतिर लक्षित थियो ।
लक्ष्मी : यो ’तर’ शब्दले जहिले पनि मलाई चिमोट्छ । शब्दकोशमै यो शब्द नभए हामी दुईचार हात अघि हुन्थ्यौँ कि ?
पुण्य : अब भने अभित सरले खाँट्टी कुरा नभनी सुख नपाउने हुनुभयो ।
अभित : भन्ने कुरा भन्छु नै । जीवनभर आँसु बगाउने मान्छे छैन पो भनेको त । अरूहरूले त दुईचार दिनपछि भुलिहाल्छन् नि । श्रीमती भई भने जीवनभर सम्झिरहन्छे । दु:ख परेका बेला पति सम्झेर आँसु चुहाउँछे । सुख परेको बेला पनि पतिको अभाव महसुस हुन गई सुख दु:खमा रूपान्तर हुन्छ । अत: दु:खको घर नबनाऊँ भन्ने मेरो इच्छा हो ।
पुण्य : फेरि त्यही सोच आयो । पुरातनवादी सोचका सिकार छौँ हामी । विश्व कोठामा कैद भइसक्यो । हामी भने सत्रौँअठारौँ शताब्दीको युगमा छौँ । अनि हाम्रो प्रगतिमा पूर्णविराम नलागे कसकोमा लाग्छ त ?
लक्ष्मी : हजुरको कुरा राम्ररी बुझिएन नि ।
पुण्य : बुझ्न सजिलो छ । सतीप्रथाको धङधङी मनमा राखिराख्यौँ भने नारीलाई पुरुषत्वको अहङ्कारले थिचिराख्यौँ भने अभित सरले भनेजस्तो विदुर/विधुवाको जीवन रोएरै बित्छ । मान्छेले मान्छेलाई पिजडामा कैद गर्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।
कर्णकान्त : विवाहलाई महान् बनाउन नर–नारी दुवैले जीवविज्ञानको ज्ञान लिनुपर्छ । सफल भन्न सजिलो छ तर सफल जीवन बाँच्न गाह्रो छ । विवाहले नै कुनै पनि मान्छेको पूर्ण परिचय र चिरत्रको गठन गर्छ । विवाह मान्छेको आनन्दको घडी हो या विनाशको सुरुआत हो ? त्यसको लेखाजोखा गर्ने काम दम्पत्तिको हो । अँझ म त भन्छु– विवाह भन्ने कुरा पुरुषका निम्ति समाप्तितिरको चरण हो भने महिलाका निम्ति आरम्भको चरण हो । विवाहले कुनै पनि वर्गमा सौभाग्य छाउनुपर्छ । यदि उसको वैवाहिक जीवन सौभाग्यशाली भएन भने उसको जन्म पनि व्यर्थ हुन्छ ।
सृष्टि : (केही अघि सर्छे । अभितको मुहारलाई एकक्षण नियाल्छे ।) मान्छे स्वतन्त्ररूपमा जन्मन्छ र स्वतन्त्ररूपमा नै मर्छ । त्यसैले मान्छे बाँच्दा पनि स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ । आफ्नै बलले खुट्टा टेक्यो भने निश्चय नै ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । विवाहको नाममा जिन्दगी बन्धकमा राख्ने काइदाचाहिँ ठिक हैन ।
पुण्य : म पनि यस कुरामा सहमत छु । अँझ म त भन्छु– विवाहपूर्व होस् यापश्चात् नर–नारी दुवै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । दुवैले आ–आफ्नै दक्षता र क्षमताले बाँच्न पाउनुपर्छ । एकको अर्कोमाथि नचाहिँदो हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन्न । दुईमध्ये कसैको मृत्यु भए अर्कोले पूर्णरूपेण स्वतन्त्र जीवन व्यतित गर्न पाउनुपर्छ । चाहे उसले पुनर्विवाह गरोस् या सधुवा जीवनको चालचलनमा रमाउन चाहोस्, त्यो उसको मौलिक हक हो । त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैको हुन्न ।
कर्णकान्त : विवाह यस्तो होस्, जसमा जातीय समानता नहोस् अर्थात् अन्तर्जातीय विवाह उत्तम हो । जीवनका हर आँधीबेहरीमा साथ पाउँदामात्र त्यो जोडी उत्कृष्ट ठानिन्छ । झट्टै फैसला गर्ने कुरा हैन विवाह । जाँचविचार गरेरमात्र विवाह हुनुपर्छ । विवेक, बुद्धि र इन्द्रियजन्य सुख पाउन दुई हृृदय एक ठाउँ मिली सरितामा परिणत हुनुपर्छ । त्यो सरिता नै दुवैको मनको सरिता हो । कुशलतापूर्वक जीवन सञ्चालन गर्ने हो भने विवाह अनुपम प्रेम बन्छ । प्रेम गर्ने अनि त्याग्ने प्रवृत्तिबाट संसारमा कोही पनि सुखिरहन सक्तैन ।
लक्ष्मी : हुनत विवाह जीवनका लागि हो, जीवन विवाहका लागि हैन । सृष्टिको नियम चलिरहोस् भन्ने हो भने तपस्वी बनेर गुफा पस्नु पनि भएन, जीवनभरि कुमार–कुमारी भएर रहनु पनि भएन ।
कर्णकान्त : रूप एउटासँगभन्दा अर्कोसँग राम्रो, अँझ अर्कैसँग उत्तम हुन सक्छ । त्यस्तै धन, गुण, योग्यता, क्षमता, शील–स्वभाव, उच्च खान्दान पनि अरूसँग नै उत्तम हुन सक्छ । बजारको वस्तुजस्तो फेरबदल गर्न नसकिने भएकोले हामीले एकपटक विवाह गर्नुपर्छ तर त्यो विवाह रूप, धन, गुण, योग्यता, क्षमता, उच्च खान्दान, शील–स्वभावसँग हैन आत्मासँग गर्नुपर्छ । विवाह भइसकेपछि भने जे पाइयो, पाइयो त्यसैबाट सन्तुष्ट बन्न सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, जुन पुरुषले आफ्नी स्त्रीलाई आफ्ना लागि श्रेष्ठ ठान्छ, जुन स्त्रीले आफ्ना पतिलाई आफ्ना लागि श्रेष्ठ ठान्छे, त्यो विवाहजस्तो उत्तम विवाह सायदै हुन्छ । त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध चिरस्थायी हुन्छ । म त अँझ भन्ने गर्छु, जोसँग शारीरिक योग्यताका साथै उत्तम भावनात्मक योग्यता छ, उसैसँग विवाह गर्दा बेस हुन्छ ।
लक्ष्मी : ए बा–बा, सम्पूर्ण प्राणीमा यौनभोक हुन्छ नै । त्यसको तृप्ति भएन भने विकृति पैदा हुन सक्छ, यौनकुण्ठाले मान्छेको मन द्रविभूत हुन सक्छ ।
सृष्टि : राम्रोचाहिँ सबै मेरै भागमा परोस् भन्नु त ठीकै हो तर ठिक्क सेवन गर्दा नै उत्तम हुन्छ ।
अभित : म एक्लोले यो संसारको रथ हाँकिएको पनि छैन र मजस्ता पच्चीस प्रतिशत मान्छे अविवाहित बस्दैमा सृष्टिको नियममा कुनै फेरबदल पनि हुन्न ।
लक्ष्मी : हुन्छ, अवश्य फेरबदल हुन्छ । प्रकृतिको सृष्टिमा नभए पनि (सृष्टितर्फ नजर फ्याँक्दै) हाम्री सृष्टिको जीवनमा अवश्य फेरबदल हुन्छ । (हाँसो छाउँछ ।)
अभित : फेरि विश्वको जनसङ्ख्या पनि घट्नु छ नि !
लक्ष्मी : उसो भए औषधी, अस्पताल र डाक्टरहरू नहुँदै उचित भो, हैन ? (सबैमा हाँसो छाउँछ ।)
अभित : कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ, म्याम तर वास्तविकताचाहिँ घामजूनझैँ छर्लङ्ग छ ।
सृष्टि : पुण्य सर ! मलाई उपाय बताइदिनुपर्यो । एउटा अनौठो खालको एन.जी.ओ.मा मैले जागिर पाएकी छु । त्यसका लागि मैले विवाहदर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुछ । पहिले त ढाँटेर निवेदन दिएँ । परीक्षा भो । म उत्तीर्ण हुँदै गएँ । अहिले भने आपतमा परेँ । मैले त्यो जागिर नगरी भएकै छैन । अर्थोक सबै कुरा राम्रो छ ।
लक्ष्मी : म पनि विवाहित, पुण्य सर पनि विवाहित । अविवाहितले अविवाहितसँगै सल्लाह गर्नु बेस हुन्छ ।
सृष्टि : कुरो विवाहको हैन । विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको हो ।
पुण्य : एक न एकदिन विवाह गर्नु नै छ भने आफूले राम्ररी खुट्टा टेकेपछि विवाह गर्नु उत्तम हुन्छ ।
सृष्टि : बेसकै कुरा गर्दा मसँग अर्को कुरो पनि छ ।
लक्ष्मी : के–कस्तो कुरो ?
सृष्टि : ममात्र एउटा सन्तान चाहन्छु, पति हैन । अहिलेचाहिँ विवाहदर्ता प्रमाणपत्र चाहन्छु, विवाहित जीवन हैन ।
लक्ष्मी : चिची पनि पापा पनि खोजेर कहाँ पाइन्छ त ?
पुण्य : पाइन्छ । यस धर्तीमा सबथोक पाइन्छ । सिर्फ आफूलाई जन्म दिने आमाबुबा पाउनु दुर्लभ हो ।
सृष्टि : (केही उत्साहित हुँदै) उसो भए उपाय बताउनुस् न त सर ।
पुण्य : हतार गर्नु हुन्न । हडबडको काम गडबड हुन्छ । पहिले अभित सरको मनको भावना बुझौँ अनि समाधान भनौँला ।
अभित : (खिन्न मनस्थितिमा) मैले अघि जे भनेँ, मेरो नीति र अडान त्यही हो । म आफ्नै मनले बाँच्न चाहन्छु । जोडिएको, गाँसिएको मन अस्वीकार्य छ मलाई ।
पुण्य : कसैको उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि त्याग त गर्न सक्नुहुन्छ नि ?
अभित : मबाट संसारले लाभ लिन सक्छ । त्यस्तो लाभाङ्शमा अनिष्टकारी स्वार्थ भने लुकेको हुनु हुन्न ।
पुण्य : तपार्इं प्रकृतिको सृष्टि चलोस् भन्नुहुन्छ हैन ?
अभित : जरुर ।
पुण्य : उसो भए तपाईंसँग एउटा सन्तान हुनुपर्छ ।
अभित : विवाहविना सन्तान हुन्न । मलाई पत्नी अस्वीकार्य छ ।
पुण्य : तपाईंसँग एउटामात्र सन्तान हुन्छ, त्यो पनि तपाईं स्वयम्को रगत तर श्रीमती बिलकुलै हुन्न । अब त भो ?
लक्ष्मी : यो अर्को असम्भव कुरो !
सृष्टि : मन मिलेपछि असम्भव पनि सम्भव हुँदै जान्छ ।
(अभित र लक्ष्मी छक्क पर्छन् । पुण्य र सृष्टि मुखामुख गर्दै अभित र लक्ष्मीलाई हेर्छन् । केही क्षण सन्नाटा छाउँछ ।)
कर्णकान्त : कोही नबोलेको बेला बोल्ने मेरो काम हो । यसबेलाको मेरो बोलाइमा सबैको ध्यान गाडिन्छ । सुन्नुस्, म भन्दै छु– पति ठिक भए स्त्री ठिक हुन कर लाग्छ भने स्त्री ठिक भए पति पनि ठिक हुन बाध्य हुन्छ । को पिँजडा बनाउँदै छ र को जाल बुन्दै छ अनि किन ? पति र पत्नी दुवैले समयमै बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । पति–पत्नीमा तिलको पहाड बनाउने सोच किमार्थ उचित हुन्न । सम्झौता नै जीवन हो । वैवाहिक जीवनमा त यो अँझ सक्रियताका साथ लागू हुन्छ । आमाबुबाले धनसम्पत्ति हेरेर विवाह गर्दिनु आफू स्वयम्लाई श्राप दिनु हो । शारीरिक सौन्दर्यलाई हेरेर विवाह गर्दा त्यो विवाहको मृत्य चाँडै हुन्छ किनकि शारीरिक सौन्दर्य जीवनभरि उस्तै रहन्न । शारीरिक सौन्दर्य ओइलाएझैँ वैवाहिक जीवन ओइलाउँछ । कुनै पनि मान्छेले आफ्नो स्तरभन्दामाथि विवाह गर्नु आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउनु हो । मान्छेहरू प्रेममा सपना देख्छन् र अघोरै रमाउँछन् तर विवाहमा ब्यूँझन्छन् र पछुताउँछन् ।
पुण्य : कर्णकान्तजीको लामो कुरो पनि सुनियो । भन्नुस् त अभित सर, के म वकिल बोलाऊँ ?
अभित : (हैरान हुँदै) कुरो स्पष्ट नबुझीकन म के भनूँ र ? वकिलको प्रयोजन पनि ज्ञात हुनुपर्यो नि ।
लक्ष्मी : हाम्रो यो जमघटमा वकिलको के काम ?
पुण्य : विनाकाम कुनै पनि पेसेवर मान्छेलाई बोलाउनु हुन्न भन्ने कुरा मलाई पूरा हेक्का छ । कुरो स्पष्ट भएनछ । म स्पष्ट पार्दै छु । (उनी सृष्टितर्फ नजर घुमाउँछन् ।)
सृष्टि : पुण्य सर ! जसोभन्दा र गर्दा दुवै पक्षलाई उत्तम हुन्छ, त्यसै गर्नुहोला ।
अभित : भन्नुस् । मैले के–कस्तो त्याग देखाउनुपर्यो ?
पुण्य : तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ, पति हुनु हुन्न । पति हुनुपर्यो र सृष्टिलाई विवाहदर्ता प्रमाणपत्र दिलाइदिनुपर्यो । तपाईंहरू दुवैको मन वैवाहिक जीवन बिताउने रहेनछ । यस कुराको सम्मान गर्दै म सल्लाह दिन्छु– दुवैसँग एकएक सन्तान हुनु जरुरी छ । अत: तपाईंहरू पाँच बर्से ‘करार–विवाह’ गर्नुस् ।
कर्णकान्त : गर्नुस्–गर्नुस् । ‘करार–विवाह’ गर्नुस् । पृथ्वीको गर्भका वस्तुको भाउ त्यति अनमोल छैन, जति नारीको प्रेमभित्र बन्द पुरुषको छ । सुखमय वैवाहिक जीवनको नयाँ प्रारम्भ हो । पुरुष हुन विवाहपूर्व पूरा आँखा खोल्नुपर्छ तर विवाहपछि आधा आँखा चिम्लिनुपर्छ ।
अभित : अँझ अरू केही छन्, त्यस्ता सर्तहरू ?
कर्णकान्त : वैवाहिक जीवनको कलिलो मुनालाई जोगाउन दुवैले बराबरी प्रयास गर्नै पर्छ । एकोहोरो रोटी पाक्दैन । पति पट्टी हो, उसले पत्नीको घाउ निको पार्नुपर्छ । पत्नी मलहम हो, उसले पतिको पीडा कम पार्नुपर्छ । जब विवाह हुन्छ, तब नयाँ जीवनको अध्याय सुरु हुन्छ । हृदयको स्वीकारोक्तिविना विवाह जीवनका लागि अभिशाप हो ।
पुण्य : कर्णकान्तजी, यो ‘करार–विवाह’ हो । मात्र पाँच वर्षका लागि औपचारिक पति–पत्नीको नाता कायम हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर केही कुरा भन्नुस् न ।
कर्णकान्त : भन्नै थाल्ने हो भने कुरा त कति आउँछन्–आउँछन् । ‘करार–विवाह’ को कुरो एकदमै मनासिब छ । समाजमा पनि पच्छ । नपचे पचाउनुपर्छ । पहिलो सन्तान अभित सरको हुनेछ । पाँच वर्षको अन्तरालमा जन्मने अर्को सन्तान सृष्टिको हुनेछ ।
पुण्य : कुरो त मेरै मनको भन्नुभयो । यसो गर्दा सृष्टि घाटामा पर्नुहुन्छ नि त !
कर्णकान्त : यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप अभित सरले आर्थिक व्ययभार बहन गर्नुपर्छ ।
लक्ष्मी : लौ अभित सर, तपाईंको राय बुझौँ न त !
अभित : म सहमत छु ।
सृष्टि : (खुसी हुँदै) धन्यवाद ! धन्यवाद !! मेरो मनको अभिष्ट पूरा हुने भयो । अब म जागिरे हुने भएँ ।
पुण्य : उसो भए वकिल बोलाऊँ त ?
(सहमति स्वरूप अभित र सृष्टि दुवै टाउको हल्लाउँछन् । पुण्य फोन गर्छन् । केही क्षणमै वकिल लक्ष्मीकान्तको प्रवेश हुन्छ । ऊसँग पुण्यले सामान्य खासखुस गर्छन् । ऊ कागजपत्र तयार पार्छ र अभित तथा सृष्टि दुवैलाई सहीछाप गराउँछ । पुण्य र लक्ष्मीलाई साक्षीका रूपमा सही गराउँछ र एकएक प्रति दुवैलाई दिन्छ ।)
ल अबका पाँच वर्षका लागि तपाईंहरू दुवै पति–पत्नी । आआफ्नो पेसा र वैयक्तिक कारोबारमा एकअर्काको कुनै हस्तक्षेप हुने छैन । एकले अर्काको भावनामा खेलबाड गर्न सख्त मनाही छ । जे हुन्छ र जे गर्नुहुन्छ, दुवैको मन मिलेपछि गर्नुहुन्छ । बेमेल भएमा हामी साक्षी छौँ ।
लक्ष्मी : शुभकार्यमा किन विलम्ब !
(सबैजना उठ्छन् । अभितले सृष्टिलाई र सृष्टिले अभितलाई पूmलमाला पहिर्याउँछन् । दुवैले एकअर्कासँग हात मिलाउँछन् । अरूहरूले ताली बजाउँछन् । पर्दा बिस्तारै खस्दै जान्छ ।)